China Step drill, boriborin'ny dingana vita amin'ny titane, fitrandrahana boribory hexagonal, fananganana orinasa ary mpanamboatra | Boda
Davaran-dàlana, fitrandrahana dingana vita amin'ny titane, fitrandrahana fantsom-bokotra hexagonal, fandavahana kely
Fitrandrahana tohatra, fantatra ihany koa amin'ny hoe drill step na pagoda drill. Ny fantsom-pandavahana iray dia afaka manolo ny bitsika fandavahana marobe mba hikarakarana ny lavaka amin'ny savaivony samihafa arakaraka ny filàna, ary ny lavaka lehibe dia azo zahana indray mandeha nefa tsy manova ny fantsona fandavahana sy ny lavaka fametrahana.
Araka ny endrik'ilay vokatra, dia azo zaraina ho lalan-drivotra mahitsy, lalan-drivotra ary lalan-drivotra;
Izy io dia azo zaraina ho elanelana tokana, lelan-droa, elanelam-bolo efatra, boribory efatra ary boribory tohatra marobe arakaraka ny isan'ny fanapahana;
Ny fanaingoana tohatra mazàna dia fenitra nasionaly, ary ny ankamaroan'izy ireo dia namboarina ary tsy manara-penitra amin'ny fampiasana indostrialy isan'andro. Amin'ny ankapobeny, ny mpanamboatra boriborin'ny tohatra dia afaka mamokatra azy amin'ny fanomezana sary.
Amin'izao fotoana izao, ny fandavahana dingana lehibe dia vokarin'ny fikolokoloana feno an'ny CBN. Ny vy dia haingam-pandeha haingam-pandeha, karibida simenitra, sns., Ary ny fahamendrehan'ny milina dia ilaina avo. Araka ny toe-javatra fanodinana samihafa, ny fitsaboana amin'ny rindrina dia azo tanterahina mba hahalava ny androm-piainan'ny fitaovana ary hanatsara ny faharetan'ny fitaovana.
Ny fandavahana an-tongotra dia fandavahana fihodinana multifunctional. Raha ampitahaina amin'ny fandavahana fihodinana, ny lavaka savaivain'ny lavaka dia tsy manana burr ary misy lavaka afovoany. Ny fandavahana an-tongotra dia fandavahana manokana noforonin'ny andiana dingana fandavahana izay mitombo tsikelikely ny savaivony.
Ny fandavahana tohatra dia manomboka mitrandraka manomboka amin'ny savaivony farafahakeliny ka hatrany amin'ny tendrony fandavahana, ary avy eo dia manitatra tsikelikely ny lavaka. Raha ampitahaina amin'ny fandavahana mahazatra ny famaritana mitovy, dia haingana kokoa ny fandavahana ary boribory avo kokoa. Izy io dia mety indrindra amin'ny fametahana takelaka manify 4mm ary afaka manamboatra lavaka lehibe misy savaivon'ny 40mm indray mandeha.
Ny dingana borosy BOSENDA dia manolotra tsipiriany feno momba ny famaritana, ny andiam-bokin'akanjo boribory dia nalefa tany amin'ny firenena maro manerana ny faritra samihafa amin'izao tontolo izao. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, mifandraisa aminay.
Previous: Fitrandrahana simenitra marobe, fitrandrahana taila vita amin'ny seramika, fantsom-pitrandrahana alikaola, fandavahana telozoro, fantsom-baravarankely vera, fantsom-pitrandrahana rindrina, fantsom-pitrandrahana titanium
Manaraka: Kitapom-bokatra, paompy Groove Chip, paompy mahitsy mahitsy, paompy milina fitotoana feno, koba M35
Fandavahana miolakolaka, fantsom-borosy vy, vy d ...